Ilay soavaly Oldenburg, ilay mavesatra indrindra amin'ny sarivongana Alemanina | Soavaly Noti
Ilay soavaly Oldenburg, ilay mavesatra indrindra amin'ny sarivongana alemanina
Jenny monge | | soavaly
Oldenburg Horses, fantatra koa amin'ny anarana hoe Oldenburg, dia mitovy rà mafana avy any amin'ny faritra avaratra andrefan'i Lower Sachony, Grand Duchy taloha tao Oldenburg.
Ny lalàm-panorenana mavesatra an'ny karazan-tsokajy Oldenburg, dia nahatonga ireo mpitaingin-tsoavaly ireo misy amin'ny ady maro. Soavaly iray izay idealy toy ny soavaly mitaingina soavaly ary izany dia nahazo laza ho soavaly lasely. Equine dia mpampiofana marobe tokoa izy io, izay misongadina amin'ny fifaninanana mpitaingin-tsoavaly samihafa, izay horesahintsika avy eo.
Manomboka ny tantaran'ny soavaly Oldenburg fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX. The laza sy laza azon'ity Equine ity nanerana an'i Eropa rehetra, dia noho i Count Anton Günter von Oldenburg no betsaka. Said Count, ankoatry ny maha mpitaingin-tsoavaly malaza azy, dia mpiaro lehibe an'io karazana soavaly alemanina io.
Oldemburg, na dia ao anatin'ny hotbloods aza, dia manana fomba mampihetsi-po sy milamina miaraka amin'ny fampiatoana be. Ho fanampin'izany, ny kalitaon'ny dia an-tongotra, ny fitsidihana na ny fitsangantsanganana dia tena tsara.
1 Toy izany izy ireo?
2 Kely aminao tantara
2.1 Ny fiandohan'ny karazany
2.2 Ny fiovana lehibe amin'ny hazakazaka
2.3 Oldenburg anio
Toy izany izy ireo?
Miaraka amin'ny fisondrotana eo anelanelan'ny 160 sy 172 cm avo any amin'ny malazo, izy io dia raisina ho iray amin'ireo karazana soavaly soavaly lehibe indrindra.
Tompona a lohan'ny mahitsy izay somary masiaka ary mifototra amin'ny a hatoka lava matevina. Tena hozatra ny sorony ary somary midadasika ny tratrany. Manana lamosina matanjaka izy ireo ary a halalin'ny lomar tsara. ny fohy ny rantsam-batana ary miaraka amin'ny paosy milamina tsara.
Anisan'ireo Oldenburg maoderina kokoa, ny rantsan-tongotra lava sy maneho fihetseham-po lehibe eo an-doha.
Na dia afaka manaiky loko isan-karazany aza ny palitaony, ny tena fahita dia ny mahita volontany, mainty, chestnut ary voaroy.
Raha ny toetra amam-panahy dia biby izy ireo mahomby nefa miaraka amin'ny saro-tahotra. Ho fanampin'izay, izy ireo dia mira mitovy amin'izany vetivety dia matotra izy ireo ary asehon'izy ireo mahatoky tanteraka ho an'ny mpikarakara sy ny tompony.
Oldenburg maoderina dia afaka manavaka ny marika "O" sy satro-boninahitra eo an-tampony, izay nalahatra teo amin'ny valahana ankavia.
Kely aminao tantara
Ireo soavaly nipetraka tany amin'ny faritra Oldenburg talohan'ny taonjato fahafito ambin'ny folo dia soavaly kely sy fisaka, saingy matanjaka izy ireo hiasa ny tany mavesatra amin'ny morontsirak'i Frisia.
Ny fiandohan'ny karazany
Iray amin'ireo voalohany naneho fahalianana tamin'ny fiompiana soavaly tamin'io faritra manokana io dia Manisa Johann XVI, izay nividy Frederiksborgers avy any Danemarka, soavaly Tiorka voadio, soavaly Neapolitan mahery, ary soavaly Andalosiana. Ilay nandimby azy, ilay efa voatendry Count Anton Gunther, dia nanampy ireo rehetra ireo nitovy tamin'ireo soavaly irina indrindra tamin'izany fotoana izany. Ary ho fanampin'izay, dia namboatra soavaly ho an'ny mpanofa azy izy.
Rehefa nandeha ny fotoana, dia nanjary soavaly raitra i Oldenburg ho an'ny kalesy tsara tarehy. Ary ankoatr'izay, izy ireo dia mpitaingin-tsoavaly tsara ho an'ny asa fiompiana.
Hay fotoana telo manan-danja izay tsy maintsy asongadintsika amin'ny tantaran'ity karazany ity satria nanampy tamin'ny famolavolana azy izy ireo. Amin'ny 1820, ilay soavaly Oldenburg io no nankatoavina voalohany. Amin'ny 1861, ity karazana ity dia natolotra tao amin'ny rejistra ny karazana Alemanina. Ary farany, 1923, natambatra ny boky fandalinana soavaly Oldenburg sy ny boky fandalinana Ostfriesen equine ary Niorina ny Fikambanan'ny mpiompy soavaly Oldenburg ny anio.
Ny fiovana lehibe amin'ny hazakazaka
Ny soavaly Oldeburg, toy ny mahazatra amin'ny karazany maro, niatrika fanovana isan-karazany mankany amin'ny farihy misy ny tantarany. Ireo fanovana ireo dia nahatonga azy ho lasa karazany azontsika ankasitrahana ankehitriny. Ireo equines ireo dia nanjary noheverina ho iray amin'ireo soavaly mety indrindra amin'ny fifaninanana hazakazaka sy mpitaingina soavaly, indrindra ny akanjo sy ny attraillados, izany rehetra izany dia vokatry ny fanatsarana ny toetra amam-pahalalana mamaritra azy ankehitriny.
Nandritra ny tantarany, ny karazana Oldenburg dia nahazo karazana génétique manaitra. Ireo karazana toa ny Neapolitans, Andalusians, Berbers, Cleveland Bay, Normans ary Thoroughbreds, izy ireo no namolavola ny Oldenburgs.
Ny karazany dia natsangana teo ambonin'ny fototra iray misy ny maria amin'ny fiompiana sy ny fiara fitaterana rehetra.
Ny karazany dia nanana be dia be ny fampiasana: soavaly kalesy, soavaly artillery, soavaly fiompiana. na izany aza miaraka amin'ny fisian'ny mekanisialy, nandritra ny dimampolo sy enimpolo taona, nosoloina ireo lahasa izay efa notanterahiny. Ny filana soavaly mitaingina kalesy dia nihena be tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Na izany aza, ny fitomboan'ny fialamboly sy ny fialamboly dia nahatonga ny mpiompy Oldenburg hanova ny làlan'ny karazany. Niezaka ny hanana soavaly mitaingina izay hanana ny lazany toa an'ireo soavaly mitaingina azy izy ireo. Ny lakroa miaraka amin'i Thoroughbred English sy Norman, dia nanome miteraka zana-kazo equine.
Ny teknolojia fandrosoana artifisialy sy ny fandrosoana dia midika fa ny soavaly dia tsy tokony ho eo ho eo amin'ny karazany. Izany no nahatonga ny Oldenburg hanohy ny fanovana azy.
Amin'ireo fifangaroana ara-nofo rehetra ireo dia tsy mahagaga raha lasa iray amin'ireo feno indrindra ny karazany. Izy ireo dia soavaly fonosana tena tsara, milalao koa ny asa fambolena, satro-boninahitra ny lisitry ny soavaly kalesy, ary koa, araka ny efa noresahintsika teo aloha, dia miavaka amin'ny fifaninanana hazakazaka sy mpitaingin-tsoavaly izy ireo.
Ny Oldenburg maoderina, mifantina soavaly sy soavaly ho an'ny fitohizan'ny karazany, mifototra amin'ny kalitao ananany ho toy ny akanjo sy soavaly mitsambikina. Inona koa, soavaly Oldenburg dia nifaninana tamin'ny Dressage tamin'ny Lalao Olaimpika.
Ny Oldenburg na Verband Association dia nanaiky soavaly 220 mahery sy 7000 mares, ho fanampin'ireo izay ampahany manokana amin'ny programa fananahana. Io no mahatonga ny boky Oldenburg ho iray amin'ny lehibe indrindra any Alemana.
Manana teny filamatra i Oldenburg Verband "Ny kalitao no fenitra tokana manisa". Izany dia efa miresaka amintsika momba ny fikatsahana ny hatsarana amin'ny karazany. Izy io koa dia miharihary amin'ny fifangaroan'ny fototarazo lehibe ananan'ireny equines ireny.
Nampiditra fanasongadinana manokana ny mara, ny sasany dia nanomboka tamin'ny razamben'i Alt-Oldenburg.
Ho fanampin'izay, isaky ny fararano dia mankalaza ny "Andro soavaly soavaly" ao Vechta ny fikambanana, izay manombana ireo soavaly tanora.
Manantena aho fa nahafinaritra anao ny namaky an'ity lahatsoratra ity toy ny nanoratako azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » Ilay soavaly Oldenburg, ilay mavesatra indrindra amin'ny sarivongana alemanina
Soavaly kilalao, miresaka momba ireo maodely sarobidy indrindra izahay
Volavolan-tsoavaly sy ireo karazana solontenany
Fampahalalana momba ny biby